သတ္တုတွင်း ဝန်ကြီးဌာန. မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဝန်ကြီးဌာနများတွင် သ
ⓘ သတ္တုတွင်း ဝန်ကြီးဌာန. မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဝန်ကြီးဌာနများတွင် သတ္တုတွင်း နှင့် ပတ်သက်၍ သတ္တုတွင်း ဝန်ကြီးဌာနထားရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ် သမ္မတ ဦးထင်ကျော် လက်ထက်တွင် သ ..
ⓘ သတ္တုတွင်း ဝန်ကြီးဌာန
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဝန်ကြီးဌာနများတွင် သတ္တုတွင်း နှင့် ပတ်သက်၍ သတ္တုတွင်း ဝန်ကြီးဌာနထားရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ် သမ္မတ ဦးထင်ကျော် လက်ထက်တွင် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ယခင်သတ္တုတွင်း ဝန်ကြီးဌာန၏ လက်အောက်ရှိ ဦးစီးဌာနများမှာ
မြန်မာဆားနှင့် အဏ္ဏဝါ ဓာတုဗေဒပစ္စည်း ထုတ်လုပ် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း
ဘူမိဗေဒ လေ့လာရေးနှင့် ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေရေး ဦးစီးဌာနတို့ဖြစ်သည်။
Wikipedia: သတ္တုတွင်း ဝန်ကြီးဌာန
ဘူမိဗေဒလေ့လာရေးနှင့် ဓာတ်သတ္တုရှာ​ဖွေ ..
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ် ..